Ahoana ny fomba hijerena sary 360 panoramika ao Ubuntu amin'ity plugin ity | Ubunlog
Ahoana ny fomba hijerena sary 360 ao amin'ny Ubuntu miaraka amin'ity plugin ity
Tsaroako taloha ela be, rehefa nividy ny finday avo lenta voalohany aho fa nametraka karazana rindranasa rehetra. Anisan'ireo rindranasa ireo aho izay nanana iray mamela ahy hanao Sary 360º, fa ny olana amin'ireo apps ireo sary panoramika dia ny hahafahana maka sary an-tsaina sy mamindra ireo sary nalaina tamin'izy ireo fa tsy maintsy nampiasa fampiharana mitovy izahay. Hatramin'izay dia tsy nahita rindrambaiko foana aho ahafahako mijery sy mamindra ireo karazana sary ivelan'ny finday finday avo lenta, ary ity rindrambaiko ity dia azo alaina ho an'ny GNOME amin'ny endrika plugin tsotra.
Tamin'ny voalohany, ny Eye of GNOME dia mifanaraka amin'ity karazana sary ity, na dia mamela antsika hijery azy ireo fotsiny aza izy ireo. Ny olana dia tsy mitovy amin'ny zavatra tsapantsika ny zavatra niainana rehefa afaka mamindra malalaka ny sary isika. Mba hamindrana ireo sary dia tsy maintsy mametraka zavatra fanampiny isika ary misy zavatra antsoina Mpijery sary Panorama ho an'ny mason'i GNOME, ilay mpijery sary default ao amin'ny fanontana mahazatra Ubuntu.
1 Sary Panoramic azontsika afindra amin'ny totozy
2 Ahoana ny fametrahana sy fampiasana ny Plugin an'ny maso GNOME
Sary Panoramic azontsika afindra amin'ny totozy
Alohan'ny hanombohako hanazava misimisy momba ity plugin ity dia mila manoro hevitra an'izany aho misy ny mpampiasa izay tsy miasa. Izy io dia miasa amin'ny ankamaroan'ny tranga, saingy ampitandremana ianao raha toa ka tsy tafita ilay vokatra nantenainao raha vao tafapetraka.
Nanazava izany, tsy maintsy mandeha izay sary voamarika panoramic rehetra. Mba hijerena raha misy izany dia hanokatra ny Eye of GNOME izahay, handeha amin'ny Image / Properties / pitsopitsony ary hizaha fa ao amin'ny fizarana XMP ananantsika GPano: UsePanoramaViewer = Marina ary metadata GPano hafa. Tamin'ny voalohany, izay sary alaina amin'ny finday amin'ny maody panoramic na izay ampiarahinay amin'ny rindranasa antoko fahatelo dia hifanaraka.
Ahoana ny fametrahana sy fampiasana ny Plugin an'ny maso GNOME
Voalohany indrindra, hametraka ireo fiankinan-doha isika amin'ny alàlan'ny fanokafana terminal ary kitiho ity baiko manaraka ity:
Manaraka, misintona izahay ity rakitra ity.
Raha vantany vao alaina ny fisie teo aloha dia esorinay ny zotra .zip.
Amin'ny dingana manaraka dia hamindra ny folder «eog_panorama» izay vao azontsika isika rehefa namoaka ny .zip ny lahatahiry ~ / .local / share / eog / plugins /. Raha tsy misy ilay lahatahiry etsy ambony dia mamorona azy izahay.
Vantany vao napetrakao ao amin'ny tranokalanao ny plugin, dia hampavitrika azy izahay:
Manokatra ny mason'ny GNOME izahay.
Handeha hanitsy / Preferences / Plugins izahay.
Manisy marika ny boaty eo akaikin'ny «EOG Panorama».
Ary efa azontsika izany.
Manomboka izao, rehefa manokatra sary mifanentana isika, tokony manomboka ho azy ny plugin ary atolotray aminay izay mety rehetra azo atao. Aza adino izany, mety hanomboka hampiasa CPU sy RAM be dia be izy io.
Ahoana ny hevitrao momba an'ity plugin ity mba hijerena sary lehibe ao Ubuntu?
amin'ny alalan'ny: omitrade.co.uk
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Multimedia » Ahoana ny fomba hijerena sary 360 ao amin'ny Ubuntu miaraka amin'ity plugin ity
Amboary ny terminal anao amin'ny Ubuntu